Degso PC Building Simulator loogu talagalay Windows
Degso PC Building Simulator
Degso PC Building Simulator,
Simulator -ka Dhismaha PC waa ciyaar dhisme kombiyuutar oo ku siin kara madadaalo iyo macluumaad labadaba haddii aad rabto inaad hesho fikrad ku saabsan ururinta kombiyuutarada.
Simulator -ka Dhismaha PC, ciyaar si madaxbannaan u horumarsan, PC Building Simulator, waxaan ka dhisnaa kombiyuutar meel xoqan. Shaqadan, waxaan ka doorannaa qaybaha ka kooban kombiyuutarka alaabada oo aan ku uruurinno kiiska. Waxaan u baahannahay inaan u kala xulano qaybaha siday u kala horreeyaan. Kaliya marka aan dooranno oo aan isku soo aruurineyno qeybaha sida saxda ah ayaan u dhameystiri karnaa kombiyuutarkeena.
Waxaad furtaa alaabadaada adoo adeegsanaya furaha I ee ku jira Simulator PC Building. Waa kuwan qaybaha aad isticmaali karto. Ka dib markaad ka xulato qaybta alaabada, waxaad higsaneysaa aagga aad ku dhejin doonto qeybta jiirka badbaadada, oo dhig qeybta adigoo gujinaya badhanka bidix. Waxaad isticmaashaa furaha T si aad caawimo uga hesho ciyaarta. Waa kuwan talooyin adiga kuu ah.
Maaddaama PC -ga Dhismaha Simulator uu hadda ku jiro marxaladda alfa, kaliya habka Casharrada, taas oo ah, habka tababarka, ayaa ku jira ciyaarta. Waxaa la qorsheeyey in ciyaarta lagu daro hab xirfadeed mustaqbalka.
PC Building Simulator Noocyada